Inona ny fanaterana farmasia? | SingleCare - Orinasa | Desambra 2021
Lalao Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana Vaovao, Wellness Fialam-Boly Orinasa Wellness Fiaraha-Monina, Fahasalamana Community, Company Mpanao Gazety Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fahasalamana Fiaraha-Monina Fanatanjahan-Tena Mavesatra
Tena >> Orinasa >> Inona ny fanaterana farmasia?
Inona ny fanaterana farmasia?
Ankehitriny mihoatra noho ny hatramin'izay taorian'ny COVID-19, ny fahazoana ny prescripts soa aman-tsara dia ampahany lehibe amin'ny fihazonana fahasalamana ho an'ny maro. Ny fivarotam-panafody sasany dia manolotra serivisy fanaterana izay manamora ny fahazoana ireo fanafody ilainao halefa aminao mivantana. Na tsy afaka mandeha manokana any amin'ny fivarotam-panafody ianao noho ny halaviran'ny fiaraha-monina, ny aretina, na noho ny antony hafa, ny fandefasana fanafody dia mety ho safidy mety aminao. Andao hojerentsika lalina kokoa ny atao hoe ny fivarotam-panafody sy ny fomba fiasan'izy io.
Ny fanaterana ny fivarotam-panafody dia dingana iray handefasana mailaka anao mivantana any amin'ny fivarotam-panafody ampiasainao hamenoana ny zava-mahadomelina anao. Raha tokony handeha fiara ara-batana mankany amin'ny toerana fivarotam-panafody ianao, dia mora kokoa ny mitondra ny dokam-panafanao nefa tsy mila miandry na milahatra manalavitra anao.
Fahazoana: Ny zavatra manintona indrindra amin'ny fanaterana ny fivarotam-panafody dia ny fitsimbinany fotoana ho an'ny olona. Raha tokony hiandry am-pilaminana mandritra ny ora maro ianao dia azonao atao ny mandefa ny fanafody alefa any an-tranonao. Ny ankamaroan'ny fivarotam-panafody dia mamela ny fandoavana mialoha sy ny famenoana mandeha ho azy.
Fiarovana: Ny fahazoana ny fanafody alefa any an-tranonao no safidy azo antoka indrindra, indrindra mandritra ny COVID-19. Io dia ahafahan'ny olona manana aretina na kilema mijanona ao amin'ny toerana azo antoka sy mampionona ny tranony fa tsy mila manao dia lavitra amin'ny fivarotam-panafody.
Tsiambaratelo: Ny serivisy fanaterana prescription dia azo antoka ihany koa raha ampiasaina amin'ny resaka tsiambaratelo an'ny marary. Ny marary dia afaka mampiasa ny mombamomba azy manokana ho an'ny fivarotam-panafody mba hametrahana ny filaharany, izay miantoka ny fiainany manokana. Ny fandefasana an-trano ihany koa dia fomba iray hafa hamenoana ireo prescription izay tsy mahazo aina anao miresaka momba anao manokana.
Fifanarahana: Any Etazonia, tombanana 30% hatramin'ny 50% ny fanafody dia tsy raisina araka ny voatondro, izay mety satria mety ho sarotra ny mahatadidy na mahita fotoana handehanana any amin'ny fivarotam-panafody rehefa tonga ny fotoana famenoana. Ny serivisy fanaterana ny fivarotam-panafody dia mety hanampy amin'ny fanatsarana ny fifikirana amin'ny fanafody satria izy ireo dia miala amin'ireo dingana ireo.
Safidy lehibe ho an'ny olona sasany ny fanaterana ny fivarotam-panafody, saingy misy lafy ratsy kely tokony ho fantatra.
Saram-pandefasana: Ny fivarotam-panafody maro dia handoa sarany fandefasana izay hampiakatra ny vidiny totalinao amin'ny fizahana. Na dia tokony ho $ 5 aza ny saram-pandefasana dia mety hitombo izany ary ho an'ny olona sasany dia mety tsy ho vita io.
Ny fanemorana ny kaonty mailaka: Ny fahazoana ny fanafodyo amin'ny mailaka dia mety maharitra ela kokoa noho ny fakana azy ireo mivantana. Raha mila fanafody avy hatrany ianao, dia mety ho safidy tsara kokoa ny mijanona amin'ny fivarotam-panafody satria mety maharitra andro maromaro vao tonga amin'ny alàlan'ny mailaka ny fanafody.
Fifandraisana amin'ny farmasia: Rehefa misafidy ny hanaterana ny fanafody ianao fa tsy haka azy ireo, dia tsy afaka mifampiresaka mifanatrika mivantana amin'ny farmasinao koa ianao. Na dia azo atao aza ny miantso ny mpitsabo anao amin'ny alàlan'ny telefaona ary asaivo mamaly fanontaniana mety anananao izy ireo, ny olona sasany dia mety tsy hahita ny afaka miresaka mivantana amin'ny mpivarotra fanafody momba ny fanafody ataon'izy ireo, indrindra raha manomboka fanafody vaovao izy ireo.
Iza ireo fivarotam-panafody manolotra serivisy fanaterana fanafody?
Ny ankamaroan'ny fivarotam-panafody lehibe dia manolotra serivisy fanaterana trano, ao anatin'izany ny Walgreens, CVS, Rite Aid, ary Walmart. Noho izany, mety hisy fivarotam-panafody akaiky anao izay afaka mandefa ny diavinao any an-tranonao.
Ireto fivarotam-panafody ireto dia mety manana politika hafa kely momba ny fandefasana trano. Ohatra, tsy ny toerana rehetra an'ny Rite Aid no manolotra fanaterana any an-trano. Mety tsy mitovy ihany koa ny ora fanaterana. Walgreens dia manolotra fandefasana mivantana, izay mety hitondra ny fonosanao ho anao raha vao iray na roa andro fiasana amin'ny alàlan'ny FedEx. Ny Pharmacy CVS aza mamela ny mpanjifa hanisy entana tsy misy preseta amin'ny filaharany ankoatry ny fanafody omena azy ireo. Hevitra tsara foana ny manao ny fikarohana sy miantso ny fivarotam-panafody izay tianao hampiasaina hahazoana antoka fa azonao tsara ny serivisy fanaterana fanafody.
Ny fivarotam-panafody mailaka vs. serivisy fanaterana farmasia
Ny serivisy fanaterana ny fivarotam-panafody dia mitovy amin'ny natiora fivarotam-panafody, saingy tsy mitovy kely izy ireo. Miaraka amin'ny serivisy fanaterana ny fivarotam-panafody, ny dokotera dia hiantso fanafody amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana. Avy eo, ny mpivaro-panafody iray dia mameno ny fanafody ary manodina ny mombamomba ny fiantohana ny mpanjifa. Farany, na manome ny mpanjifa mivantana na alefany any amin'izy ireo ny mpanjifa.
Tsy mitovy ny fivarotam-panafody mandefa mailaka. Ny teny hoe 'pharmacy pharmacy mail' dia mazàna midika fivarotam-panafody izay fananan'ny mpitantana tombotsoan'ny fivarotam-panafody lehibe izay hanolotra ireo serivisy ireo amin'ny anaran'ny mpanjifa drafitra fahasalamana, hoy i Jason Reed , Pharm.D., Mpivarotra fanafody ao amin'ny Atrium Medical Center any Ohio. Ny tombony dia ny fanomezana kojakoja lava kokoa (na dia efa fahita ankehitriny aza ny famatsiana 90 andro amin'ny fivarotam-panafody) ary ny copay ambany ho an'ny mpikambana.
Nanomboka nipoitra ny serivisy fanaterana ny fivarotam-panafody mba hahafahan'ny farmasia mpivarotra antsinjarany mifaninana amin'ny serivisy sy ny fanamorana ny fanaterana fanafody any an-trano, hoy ny fanazavan'i Dr. Reed. Ny rojom-barotra lehibe sy ny fivarotam-panafody maro tsy miankina izao dia hanolotra serivisy fanaterana ny marary, indraindray na dia maimaim-poana aza. Ny singa iray hafa amin'ny serivisy fanaterana farmasia dia ireo orinasa toa an'i Uber sy Lyft izay hahazo fanafody amin'ny fivarotam-panafody fivarotana ary hanatitra izany amin'ny marary. Tadidio fa hisy sarany amin'ity karazana serivisy ity.
Ireo fivarotam-panafody manolotra serivisy fanaterana dia tsy manolotra famenoana 90 andro toy ny fivarotam-panafody mandefa mailaka. Izy ireo koa dia mirona ho lafo kely kokoa. Ny tsy fitovizany hafa dia ny fivarotam-panafody mailaka afaka mandefa akora voafehy sy fanafody manokana mila frizidaina, izay tsy vitan'ny ankamaroan'ny programa fanaterana farmasia.
Fanaterana ny fivarotam-panafody vs. kaomandy mailaka (avereno)
Serivisy fanaterana farmasia Farmasia fanafarana mailaka
Natolotry ny rojo fivarotana lehibe sy ny fivarotam-panafody tsy miankina
Manana ny mpitantana tombontsoa lehibe amin'ny fivarotam-panafody natolotry ny fiantohana ara-pahasalamana
Famenoana lehibe kokoa (vatsy 90 andro)
Mety hanana fitaterana haingana kokoa
Afaka mandefa akora voafehy, fanafody manokana ary kojakoja vata fampangatsiahana
Voasaron'ny fiantohana ve ny fanaterana ny fivarotam-panafody?
Ny fiantohana fiantohana ho an'ny fandefasana fanafody dia miankina amin'ny karazana drafitra fiantohana ara-pahasalamana anananao. Ny drafitra fiantohana sasantsasany dia hanolotra fandrakofana ampahany ho an'ny prescription alefa amin'ny alàlan'ny mailaka, ary ny sasany kosa mety tsy hanome fandrakofana mihitsy. Na dia manarona ny dokotera anao aza ny fiantoham-piainanao ho an'ny pickup ao amin'ny magazay, dia mety mbola mila mandoa saram-pandefasana ianao raha irinao handefasana azy ireo ihany. Ny saram-pandefasana dia miova arakaraka ny fivarotam-panafody.
Ahoana no fomba hanaterana ny resako?
Raha liana amin'ny fihenam-bidy amin'ny resanao ianao SY alefa maimaimpoana ho eo am-baravaranao maimaimpoana amin'ny alàlan'ny famandrihana azy SingleCare sy ny fiarahamiasa aminay GeniusRx safidy tsara. Ity ny fomba hanombohana:
Mikaroha fanafody singlecare.com/prescription-delivery hijerena raha azo ekena ny serivisy fanaterana fanafody.
Raha azo atao ny fanafody dia mila manome fampahalalana fototra ianao, toy ny adiresy fandefasanao, ho an'ny mpiara-miasa aminay, GeniusRx.
Vidio amin'ny Internet ny resanao amin'ny alàlan'ny Visa na Mastercard anao.
Alefaso any amin'ny adiresy an-tranonao ny fanafody natokana ho anao, alefa amin'ny fanjakana 50 rehetra.
Miaraka amin'ny olona maro izay mahatsapa fahatarana amin'ny fahazoana ny kaomandiny amin'ny alàlan'ny U.S. Postal Service, SingleCare dia manolotra a hotline maimaim-poana manampy amin'ny fanamorana ny fandefasana fanafody maimaimpoana avy amin'ny fivarotam-panafody mandray anjara. Ny tanjonay dia ny hanampy anao hiditra amin'ny fanafody mitsikera nefa tsy mila fanemorana ny preskripsi ilain'izy ireo.
Raha manana fanontaniana momba ny fandefasana trano ianao, eto izahay hanampy. Ny manam-pahaizana momba anay dia hanampy amin'ny famaritana raha misy ny fandefasana fanafody any amin'ny faritra misy anao. Avy eo, ho hitan'izy ireo sy hampifandray anao amin'ny fivarotam-panafody mandray anjara eo an-toerana izay hanome fandefasana fanafody maimaimpoana ianao. Aza misalasala miantso ny laharam-pitaterana ny fivarotana farmasia amin'ny 800-222-2818 na mahita anay Facebook .
Fisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny taratasim-pananahana
B.K.S. Iyengar: Zava-misy haingana 5 tokony ho fantatrao
azonao atao ve ny mandray antibiotika amin'ny aretina masirasira?
inona no manampy manala hangover
ahoana no ahazoako viagra na cialis
wellbutrin xl na sr izay tsara kokoa
inona no ataon'ny phentermine amin'ny vatana?
antibiotika mandritra ny 7 andro fa tsy 10
mandra-pahoviana aho no afaka mandray mucinex dm